बेड नहुँदा भुइँमा राखेर उपचार ! « Drishti News – Nepalese News Portal
बेड नहुँदा भुइँमा राखेर उपचार !
१८ बैशाख २०७८, शनिबार 6:51 am
काठमाडौं । दाङमा कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न अस्पतालमा बेड अभाव यथावत छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पताल बाहिर बरन्डामा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालको बरण्डामा राखेर उपचार गर्न थालिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
अस्पताल कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिँदा अस्पातलमा बेड अभाव भएको अस्पतालका व्यवस्थापक ओलीले जानकारी दिए। २५ बेड बट सञ्चालन भएको अस्पतालमा आन्तरिक व्यवस्थापनबाट ४२ बेडसम्म पुर्याएर सञ्चालन गरी बिरामीको उपचार गरिरहेको भए पनि अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा अक्सिजन बिना उपचार सम्भव नभएको र भुइँमा राखेर उपचार गर्न पनि गाह्रो भएको व्यवस्थापक ओलीले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको कामले गति लिएन